အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: CGI တွင် ပြောသော ဒေါ်စု စကား
CGI တွင် ပြောသော ဒေါ်စု စကား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နယူးယောက်မြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ CGI ခေါ် Clinton Global Initiative ညီလာခံ ခန်းမထဲကနေ Moderator လုပ်သူ ချာလီ ရို့စ်နဲ့အတူ တောင်အာဖရိက ဘုန်းတော်ကြီး ဒက်စ်မွန် တူးတူး (Desmond Tutu)တို့က မေးခွန်းတွေမေး မှတ်ချက်တွေ ပြောခဲ့ကြတာပါ။ မေးမြန်းပြောဆိုကြတဲ့ အကြောင်း အရာမျိုးစုံထဲမှာ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံက အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတခု ကိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုလို ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်သံ။။ VOA သတင်း။။NLD(LA)INFO.
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 10:42 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook